बेलुका खाना खाइसकेपछि उनले श्रीमती र दुवै छोरालाई बोलाएर अंशबन्डाको प्रस्ताव राखे । एक्कासि बुवाबाट यस्तो प्रस्ताव आएको देखेर दुवै छोरा अवाक् भए । दुवैले एकै स्वरले अस्वीकार गरेको सुनेर बुवाले शान्त भएर भने अब यो घरमा शान्ति कायम राख्नु छ भने यो भन्दा अर्को विकल्प छैन ।
मोहनले खेतीपाती हेर्न थालेदेखि नै उनीहरूको बन्दोबस्त पनि राम्रो हँुदै गएको हो । खानलाई धौ–धौ पर्ने त्यो परिवारले पछिल्लो समयमा कृषिबाट नै राम्रो आम्दानी गर्न थालेकाले पोहोर साल ऋण सापटी नै नलिई एकै वर्षमा कान्छो छोरा तथा एक मात्र छोरीको विवाह धुमधामसँग गरेका थिए । कान्छो छोरा सुशील भने गाउँकै हेल्थपोस्टमा बिरामी हेर्ने काम गर्छन् भने उनकी श्रीमती अञ्जलीले गाउँकै स्कूलमा पढाउँछिन् ।
बूढाबूढी दुवै जनाको स्वभाव सार्‍है असल तथा सहयोगी भएकाले स्कूलको संचालक समितिले सहरबाट आइ.ए. पास गरेकी उनीहरूकी कान्छी बुहारीलाई शिक्षकमा भर्ना गरेको हो । विवाह गरेर आउँदा मिजासिली अञ्जलीको स्वभाव स्कूलमा नियुक्त भएदेखि परिवर्तित भएको देखिन्छ । जेठानी रमालाई आफ्नै दिदीलाई जस्तो माया तथा इज्जत गर्नुका साथै मिलेसम्म उनी रमालाई कुनै काम गर्न दिन्थिनन् र सासूले पनि यति दिन तिमीले गर्‍यौ अब अञ्जलीलाई गर्न देऊ भन्थिन् तर रमा काम नगरी किन बस्न सक्थिन् र ? उनी हरेक काममा अञ्जलीलाई सघाइरहेकी हुन्थिन् । उनीहरू देउरानी–जेठानी होइन दिदीबहिनीझैं लाग्थे ।
एकपटक त उनले बुवाआमा र दाजु–भाउजूलाई राखेर अञ्जलीले भाउजू र घरप्रति गरेको व्यवहार आफूलाई सह्य हुन छाडेको बताएका थिए तर मोहन र रमाले नै यसमा दु:खी नहुन र केही दिनमा सबै ठीक हुन्छ भन्दै सुशीललाई शान्त पारेका थिए । उता अञ्जलीको व्यवहार भने दिन प्रतिदिन दाजु–भाउजू हुँदाहँुदै बुवाआमाप्रति पनि रुखो हुँदै गएको थियो । सुशीलले जति सम्झाउँदा पनि उनको व्यवहार स्वाभाविक हुन सकिरहेको थिएन । एकदिन दिक्क हँुदै सुशीलले शान्तसँग अञ्जलीको व्यवहारमा आएको परिवर्तनको कारण सोधे र उनको यो व्यवहारले बुवाआमा र दाजु–भाउजूभन्दा पनि उनी आफू दु:खी भएको र यस्तै भैरहे स्वयं अञ्जली पनि खुसी हुन नसक्ने बताए ।
बेलुका खाना खाइसकेपछि उनले श्रीमती र दुवै छोरालाई बोलाएर अंशबन्डाको प्रस्ताव राखे । एक्कासि बुवाबाट यस्तो प्रस्ताव आएको देखेर दुवै छोरा अवाक् भए । दुवैले एकै स्वरले अस्वीकार गरेको सुनेर बुवाले शान्त भएर भने अब यो घरमा शान्ति कायम राख्नु छ भने यो भन्दा अर्को विकल्प छैन । बुवाले त्यति भनिसकेपछि जेठा छोरा मोहनले आफू जेठोबाठो भएकाले कान्छो भाइ सुशीललाई उनको कमाइले यसपटक किनेको तल्लो कान्ला खेत र दुहुनो भैंसी भाइलाई दिने कुरा गरे ।
चैत्र ६, २०७३ - मनको बाघ